0 Monday November 16, 2020 - 12:12:02
Ra'iisulwasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed, 4tii Nofembar go'aankiisii ahaa in ciidamo federaal ah loo diro gobolka Tigreega ee Waqooyiga dalkaas ayaa u'eg mid argagax iyo qasba ku beeray gobolka Geeska Afrika iyo meelo ka baxsan gobolka. Qowmiyadaha ku dhaqan dalkaas ayaa tiro ahaan lagu sheegaa…
0 Thursday November 12, 2020 - 18:03:48
Dagaalka ahliga ah ee ka dhax holcaya dowladda Itoobiya iyo mid kamida qowmiyadaha ugu awoodda badan wadankaas ayaa saameyn xun ku reebaya xukuumadda Addis Ababa.
0 Monday November 02, 2020 - 06:44:17
Sheekh Fu'aad Maxa'ed Khalaf oo kamid ah culimada Diinta Islaamka ayaa kalimad ka jeediyay masjid ku yaala wilaayada islaamiga ah ee Jubbooyinka kadib salaaddii Jimcaha, wuxuuna kaga hadlay xadgudubka ay dowladda Faransiiska u geysaneyso diinta Islaamka.
0 Tuesday October 06, 2020 - 06:11:47
Wararka ka imaanaya wadanka Maali ayaa sheegaya in Jamaaco Jihaadi ah ay xaqiijisay hadaf weyn kadib markii xabsiyada loogasii daayay boqolaal dagaalyahanno jihaadiyiin ah kuwaas oo muddo sanada ah ku jilba xirnaa xabsiyada cadowga.
0 Thursday October 01, 2020 - 11:01:23
0 Thursday September 17, 2020 - 17:23:53
Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa ku guulaysatay in ay xabsiyada cadowga kasoo fakiso kumanaan maxaabiis ah oo ay ku jiraan muhaajiriin rag iyo dumar intaba.
0 Monday September 14, 2020 - 11:45:49
Maalintii Jimcaha ee taariikhu ku beegneed 11 Septembar 2020 magaalada Kismaayo waxaa lagu dilay Nin lagu magacaabo Shaafi Raabi oo saameyn weyn ku dhax lahaa maamulka isku magacaabay Jubbaland.
0 Sunday September 13, 2020 - 16:39:45
0 Friday September 11, 2020 - 13:11:06
Maanta oo ah Jimco Taariikhduna Ku Beegantahay 11 September waxay ku astaysantahay xilligii ay dhaceen weeraradii New York iyo Washington oo lagu naafeeyay dhaqaalaha dowladda Mareykanka.
0 Monday September 07, 2020 - 21:08:02
Taliska ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay howlgallo Jihaadi ah oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya.
0 Wednesday September 02, 2020 - 13:16:43
Dowladda Faransiiska ayaa markii ugu horraysay bilaawday in ay maxkamad soo taagto dad loo heysto in ay gacan ka geysteen weerarkii barakaysnaa ee shan sanadood ka hor ka dhacay magaalada Paris kaasi oo lagu beegsaday xarun uu ku shaqeynayay wargeys gaaleed aflagaadeeyay nabigeena maqaamka sare leh…
0 Wednesday September 02, 2020 - 10:53:19
Warbixintan oo ahayd mid aad u dheer ayaan shaley kasoo qaaday kaalinta CIA-da Mareykanka iyo MI6-ka Ingiriiska ku leeyihiin weerarada ashahaada la dirirnimo ee lagu ugaarsado Muslimiinta kunool Kenya si gaar ah dadka ay ka muuqato shacaa'irta diinta Islaamka ama looga shakiyo inay xiriir la leeyihiin…
0 Thursday August 27, 2020 - 14:00:45
Sheekh Xasan Daahir Aweys oo hadda isagoo xabsi guri ah u xiran DFS ayaa si kulul uga hadlay weerarkii axmaqnimo ee Mareykanku ku dilay Sheekh C/Qaadir Kumandoos oo kamid ahaa Hogaamiyeyaasha Islaamiyiinta ee sida weyn looga yaqaano Soomaaliya.
0 Sunday August 23, 2020 - 09:27:35
Baarayaal Mareykan ah ayaa dowladooda ku boorriyay in ayjoojiso hawlgallada militari ee ay ka waddo Soomaaliya taas bedelkeedna ay ku dadaasho hanaanka wadahadallada oo lagu bedelo dagaalka!
0 Tuesday August 18, 2020 - 13:55:08
0 Thursday August 06, 2020 - 16:28:32
Muuqaalkan wuxuu si qoto dheer u dhex tiimbanaya xaqiiqda dhabta ah ee siraaca soo jireenka ah ee Soomaaliya iyo Itoobiya, wuxuuna soo bandhigayaa hadalada, diraasaatka iyo buugaagta ay madaxda reergalbeedka iyo kuwa Itoobiya ku qirayaan ujeedka duullaankooda Soomaaliya iyo cadowtooyada ba'an ee…
0 Wednesday August 05, 2020 - 20:03:18
Chris Reynolds, waa madaxa howlgalka EUCAP oo ah howlgal uu midowga Yurub ku sheego mid lagu dhisayo tayada iyo awoodda ciidamada badda ee Soomaaliya. Marwaliba oo uu aadayo shaqadiisa, waxaa Chris Reynold lagu galbiyaa laba gaari oo kuwa gaashaaman iyo koox ciidamo ah.
0 Visits: 1787 | Tuesday August 04, 2020 - 14:43:44
Wazaarada gaashaandhiga Mareykanka ayaa bishii July ee sanadkii 2019ka Stephen Townsend u magacowday taliyaha ciidamada Mareykanka ee Africa ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano AFRICOM, isagoo badalay Generaalkii ka horeeyey ee la oran jiray Thomas Waald Hauser ee dhiigyacabka ahaa.
0 Wednesday July 29, 2020 - 12:20:57
Dr. Suldaan Maxamad Garyare oo kamid ah falanqeeyaasha Soomaalida ee sida aadka ah ugu sii dhuun daloola xaaladda dalka ayaa ka hadlay xaaladda ay wajahayso DF wixii ka dambeeyay xil ka qaadistii Xasan Cali Kheyrre.
Sheekh Yuusuf Kaba kutukade oo sheegay in ay mashaariic Horumarineed ka wadaan gobolka Sh/dhexe [Wareysi].
0 Thursday July 23, 2020 - 12:32:33
Sheekh Yuusuf Ciise Kaba kutukade oo waaliga wilaayada Islaamiga Sh/dhexe ayaa bixiyay wareysi uu uga warbixinayo mashaariic horumarineed oo wilaayadu ay waddo dhowr degmo.
0 Monday June 01, 2020 - 19:24:25
Dawladaha inta ugu badan waxa lagu qiimeeyaa waxa ka jira dhulka ay maamulaan, Saameyn aad u yar bay yeelan kartaa qiimeynta dibeddu marka gudaha la barbar dhigo tusaale ahaan:-
0 Tuesday May 12, 2020 - 19:58:07
Silvia Romano oo ah gabar 25 jir ah balse hadda la baxday magaca Caa'isha waxay muddo 18 bilood ah ku sugnayd gudaha Soomaaliya iyada oo gacanta ugu jirtay Xaraka Al-Shabaab sida ay qortay warbaahinta dalka Talyaaniga.
0 Saturday May 09, 2020 - 10:24:01
Wariye ka shaqeeya wargeys lagu magacaabo bylinetimes ayaa booqasho ku yimid magaaalada caasimadda ah ee Muqdisho, wuxuuna la kulmey dhibanayaal ehaladooda iyo dadkii ay jeclaayeen uu Maraykanku ku dilay duqeymaha uu ka wado Soomaaliya.
0 Wednesday May 06, 2020 - 17:05:13
0 Monday April 27, 2020 - 17:46:35
Afhayeenka Xarakada Al-Shabaab Al Mujaahidinta Sheekh Cali Maxamud Raage ayaa jeediyay kalimad uu kaga hadlayo cudurka dilaaga ah ee dunida ka dilaacay kaas oo loo yaqaano Karoona Fayras.
Dhageyso: Xaflad loo qabtay Duruus uu Sheekh C/llaahi Raabi akhrinayay muddo 6 sana ah oo lasoo gaba gabeeyay.
0 Saturday April 18, 2020 - 11:58:42
Munaasabad ka dhacday deegaanka Hargeysa yareey ee gobolka dhexe ayaa lagu maamuusay arday dhammeysatay duruus sharci ah oo muddo sanada ah ka socotay Masjid jaamaca deegaanka.
Taliska AFRICOM oo dafiraad indha la'aan ah ka bixiyay duqeyntii uu ku dilay Suldaankii Beesha Jareerweyne.
0 Friday April 17, 2020 - 14:21:01
Taliska ciidamada Mareykanka qaaradda Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa shalay gelinkii dambe soo saaray warbixin uu qiil ugu yeelayo duqeyn uu jimcihii lasoo dhaafay ku dilay mida kamida salaadiinta dhaqanka beelaha Soomaaliyeed.
Dhageyso: Soomaali la xanuunsan Caabuqa CODVID19 oo Wareysi bixiyay.
0 Thursday April 16, 2020 - 20:07:01
Tobanaan qof Soomaali ah ayaa cudurka dilaaga ah ee Carona Virus ugu dhimatay wadamada reergalbeedka gaar ahaan Yurub iyo Mareykanka.
0 Sunday April 05, 2020 - 11:41:47
Sheekh Fu'aad Max'med Khalaf oo kamid ah culimada wilaayaatka Islaamiga ah ayaa ka hadlay musiibada Rabbi ku ciqaabay shucuubta reergalbeedka waa cudurka halista ah ee Carona Virus.
« Prev1234567 ... 15Next »
21/11/2020 - 11:04:32
19/11/2020 - 10:19:50
19/11/2020 - 09:02:51
18/11/2020 - 17:29:13
Muslimiinta Pakistan oo Xukuumadda Islamabad ku qasbay in ay Cayriso Safiirka Faransiiska.
18/11/2020 - 13:33:04
Mareykanka oo sheegay in dhammaan ciidamadiisa uu kala baxayo Soomaaliya.
17/11/2020 - 09:16:04
12/11/2020 - 18:03:48
06/11/2020 - 21:06:58
Faransiiska oo ku Jira go'doon gudaha iyo mid dibadda ah (Warbixin).
01/11/2020 - 05:00:39
29/10/2020 - 10:36:55